महङ्गो स्थानीय चुनाव, जनताको थाप्लोमा ४ अर्व बढीको व्ययभार - महङ्गो स्थानीय चुनाव, जनताको थाप्लोमा ४ अर्व बढीको व्ययभार
२०७४, २७ असार, 05:55:18 AM
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किला स्वरुप स्थानीय तह को चुनाव एक प्रदेश बाहेक सबै स्थानमा सम्पन्न भएको छ । छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण र व्यापपक जनसहभागिता सहित सम्पन्न भएको चुनावमा खर्च पनि व्यापक नै भएको छ । निर्वाचनको मिति सारेको कारण मात्रै मुलुकलाई रु.४ अर्ब बढी व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको ‘मौकामा चौका हान्ने’ प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी ?
२७ असार, काठमाडौं । १३ वैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको थियो । तर, १३ वैशाखमा सरकारले चुनाव दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप रु.२ अर्ब ६९ करोड माग ग¥यो ।
अर्थ मन्त्रालयले १८ असारमा आएर मागेको रकममा केही घटाएर रु.२ अर्ब ४४ करोड गृहलाई उपलब्ध गरायो । यो रकम अपुग हुने गृहको दाबी छ । मन्त्रालयको लेखा शाखामा कार्यरत एक उच्च पदस्थ कर्मचारीका भनाइमा, “यसले म्यादीको तलब–भत्ता पुग्छ । तर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई दिन पैसा पुग्दैन ।” प्रदेश–२ को निर्वाचन बाँकी नै छ, त्यसैले खर्च अरू बढ्नेछ । गृह स्रोतका भनाइमा, “प्रदेश–२ लागि मात्रै अझै करीब रु।१ अर्ब खर्च होला भन्ने अनुमान छ ।”
आफूहरूले चुनावी तयारी शुरू गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन मिति धकेलिंदा कर्मचारी र निर्वाचन व्यवस्थापनमा ‘कम्तीमा रु।५० करोड थप खर्च गर्नु परेको’ निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । आयुक्त नरेन्द्र दाहालका भनाइमा, “पटक पटक मिति सारिएका कारण आयोगलाई मात्रै रु।५० करोडभन्दा बढीको व्ययभार थपिएको छ ।” दाहालले भने, “थुप्रै कर्मचारी पहिल्यै अतिरिक्त तलब–भत्ता खाएर फर्किए । फेरि त्यही कामका लागि अर्कोलाई पूरै तलब–भत्ता दिएर पठाउनु प¥यो ।”
समग्रमा हिसाब गर्दा निर्वाचन मिति सारिएका कारणले मात्रै गृह र निर्वाचन आयोगले थप रु.३ अर्ब हाराहारी खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा प्रदेश–२ का लागि थप रु।१ अर्ब जति खर्च हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । यसरी हेर्दा चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयका कारण मुलुकलाई रु.४ अर्ब अतिरिक्त व्ययभार परेको देखिन्छ । दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूको खर्च यसमा समावेश छैन ।
दोस्रो चरणको चुनावी तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले २ असार ९चुनावको १२ दिन पहिले० मा प्रदेश–२ को चुनाव फेरि सा¥यो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, “५५ दिनका लागि भनेर भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीको म्याद दुई पटक थपियो र ९० दिन पु¥याइयो ।” उनले थपे, “७५ हजार म्यादीको तलब भत्ता जोड्दा मात्रै पनि रकम यसै अर्बमा पुगिहाल्छ ।”
सरकारले प्रत्येक म्यादीका लागि प्रति महीना रु।१७ हजार २३० उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक पोशाक खर्च भनेर प्रतिव्यक्ति रु।७ हजार १००, खटाएको ठाउँमा आउन जान रु.१ हजार, निर्वाचनको बेला ७ दिनका लागि प्रतिदिन विशेष भत्ता वापत रु।२५० र खाजा खर्च बापत रु.२५० दिएको छ ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रु.१९ अर्ब ३२ करोड खर्च छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये रु।१० अर्ब ४० करोड निर्वाचन आयोगका लागि र बाँकी रु.९ अर्ब सुरक्षा प्रयोजनका लागि । सुरक्षा प्रयोजनमा विनियोजित रकमले नपुगेपछि गृहले पटक–पटक थप रकम मागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले चुनावमा खटिने कर्मचारीका लागि शुरू तलबको १२१ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक खाजा खर्च बापत कर्मचारीको दर्जा अनुसार दैनिक रु।५०० देखि रु।७०० उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन शुरू भएयता आयोगले रु।५ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तीमध्ये रु।३ अर्ब भन्दा बढी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको बताइएको छ । मतपत्र छपाइबापत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र अन्य निर्वाचन सामग्री आपूर्तिकर्तालाई अझै करीब रु।२५ करोड तिर्न बाँकी नै छ । आयोगले गरेको यो खर्चमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त निर्वाचन सामग्री र गाडी लगायतको सहयोग रकम समावेश गरिएको छैन । प्रवक्ता शर्माका भनाइमा, “स्थानीय तह चुनाव भइसक्दा आयोगबाट रु।७ अर्ब हाराहारी खर्च हुने देखिएको छ ।”
निर्वाचन आयुक्तहरूले यसको दोष आयोगका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली माथि थोपरेका छन् । एकजना आयुक्त भन्छन्, “हामीले खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो । तर उहाँ ९मैनाली० ले किन्दा कमसल मसी किन्नु भएछ । चेक गर्दा यो मसीले स्ट्याम्प लगाउँदा त लत्पतिएर पूरै मतपत्र बदर हुने अवस्था थाहा भयो । यसले त चुनावलाई नै ‘स्याबोटेज’ गरिदिन्थ्यो । धन्न अगाडि नै चेक गरिएछ ।” ती आयुक्तका भनाइमा, “त्यो रातो मसी किन्न मात्रै रु.३२ लाख खर्च गरिएको थियो ।”
निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूका भनाइमा, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षा खर्च बाहेक रु।४ अर्ब २६ करोडमा सम्पन्न भएको थियो । तर यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म आयोगले मात्रै रु।६ अर्ब ९जनक शिक्षा र अन्य आपूर्तकर्ताहरूको रु।२५ करोड तिर्न बाँकी समेत० खर्च गरिसकेको छ । तर, अझै प्रदेश–२ मा चुनाव हुन बाँकी नै छ । निर्वाचनपूर्वदेखि मतगणनासम्मका हरेक कामहरूमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना भइरहेका छन् । यी प्रत्येक अवरोधले मुलुकको निर्वाचन खर्च बढाइरहेको हुन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवद्वारा लिखित ‘इलेक्सन कस्ट इन नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा आयोगको कुल खर्च रु।११ करोड थियो भने २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा यो खर्च १२२ प्रतिशतले बढेर रु।२४ करोड पुगेको थियो । यसैगरी २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनको कुल खर्च रु.३६ करोड ६ लाख थियो तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा आयोगबाट भएको खर्च रु।२ अर्ब ८० करोड ९६ लाख पुगेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय दुवैतिर गरेर यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म रु।१९ अर्ब ३२ करोड ९ लाख निकासा भइसकेको छ । तर, त्यति पैसाले पुग्ने छाँट छैन । अर्थले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनका लागि रु।२ अर्ब ७६ करोड, २०६४ सालको संविधानसभा चुनावका लागि साढे ७ अर्ब, २०७० सालको संविधानसभा चुनावका लागि रु।११ अर्ब निकासा दिएको थियो । यसले देखाउँछ प्रत्येक पटकको चुनाव बेपत्तासँग महङ्गो हुँदै गएको छ ।
आयोगका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका भनाइमा, चुनावी अभियानमा बैठक भत्ता बापत आयुक्तका लागि रु।२ हजार, सचिवलाई रु।१५ सय र सहसचिवलाई रु।१ हजार दिने व्यवस्था छ । उनले भने, “बैठकमा सहभागी हुँदा भत्ता आउने हो । त्यसैले सहसचिवको त्यति धेरै हुँदैन । आयुक्त र सचिवको धेरै नै हुन्छ ।” चुनाव तयारीका अन्तिम दिनहरूमा त एकै दिन दश पटकसम्म बैठक हुने गर्छ ।
भद्र शर्माको खोज पत्रकारिता केन्द्रमा प्रकाशित रिपोर्ट
गृह मन्त्रालयले भन्याे : सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढ्याे
गृहको एक वर्ष : संरचनागत सुधार, शान्ति सुरक्षा र सुशासनको आधार !
कोलकातामा ३३ किलो सुनसहित समातिएकालाई नेपाल ल्याएर मुद्दा चलाउने तयारी